Caasimada Hargeysa Malaga Dhigi Karaa Goob Bilicdeeda Laga Yaabsy? Haa
Sunday April 14, 2019 - 16:20:57 in Articles by Hadhwanaag News
Marka aad maqashaan magaca hargeysa waa dhulkii la odhan jray togaherer,
sababta loogu bixiyaybaa ahayd inay jirtay tog weyn amaba Haddadanba dhex mara waxana layihaa waa toggii harar.
Mid bari jabuuti kayimid oo dibadahana meelo soo maray ayaa bari igu yidhi hargeysa meel ka quruxbadan oo ka neecoow macaan isla markaasna ka habisan ma jirto balse caqabada kaliya ah inayna iyadna lahayn waddooyin haddayse heli lahayd waxay noqon doontaa goobaha ugu quruxsan geeska afrika.run badanaa.
Hargaysa waa mid ay wadooyinkeedu dhisan karaan dadkeedu waayo lama odhan karo dhaqaalaa ku yar,waxa ku nool tujaar badan oo alla weyne wax badan ugu deeqay waxa ku nool dad badan iyo dawladdu waxa karaankeeda keento iyo waxa caalamka lasoo waydiisto oo la isku dardaro waxa la helli lahaa waxbadan oo tayaysan.
Hargeysi quruxka dhiman majirto kaliya waxa u dhimanuun waddooyin ,dawlada hadda jirtaa waa dawlad waxbada lagu amaani karo kow meesha waxay ka joojisay isku dhex yaacii badnaa madaxtooyada waxay u eegtahay goob madaxtooyo wasiiradu waxay kala wataan shaqooyinkooda midna mid kuma habsaamo musuqii badnaa ma jiro .